Beledweyn: Amniga oo soo hagaagaya
13 Dec 13, 2012 - 3:39:53 AM
Tan iyo intii ay Ciidamada Jabouti ee qaybta ka ah hawlgalka AMISOM la wareegeen gacan ku haynta Baraha magaalada ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka soo reynayo ammaanka magaalada, waxaana dib u soo laabtay isu socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ,dhaq-dhaqaaqyadii ganacsiga iyo adeegyadii kale ee Nolosha asaasiga u ahaa ahaa.
Ciidamada DF Somalia iyo AMISOM ayaa fashiliyey weeraro ,qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo
ka dhici lahaa magaalada,waxaanay taasi ku ammaaneen maamulku shacabka oo ay tilmaameen iney gacan weyn ka geysteen dabagalka iyo soo qabashada dadka la tuhmo.
Taliyaha Qaybta Booliska gobolka Hiiraan Col.Cabdirisaq Cali Cabdule oo u waramay Radio Garowe ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan falal amni daro geystey oo uu ka mid yahay ninkii diley Nabadoon Marya-Cadde dhowaana la keeni doono maxkamada gobolka.
Dhowaan ayuu sheegey taliyuhu inay soo afajir doonaan kooxaha uu ku tilmaamay jiir iyo jiho diidka mar kalena mahad u celiyey ciidamada amaanka oo Dowladda Jabouti ugu horeyso ,wuxuuna hadalkisa ugu danbeysiiyey inay wadaa wacyigelino bulshada gaar ahaan waalidka caruurtoodu Al-shabaa ku jiraan inay kala soo haraan.
Halkan ka dhageyso Aadan Sooyaal oo wareystey Taliyaha Booliska More Articles